एमालेका ३ नेतालाई काेरोना पुष्टि, प्रधानमन्त्री ओली पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ! - नागरिक खोज
एमालेका ३ नेतालाई काेरोना पुष्टि, प्रधानमन्त्री ओली पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा !
१ हप्ता अगाडि • १३३ पटक पढिएको
काठमाडौं । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा सहभागी तीन नेतालाई कोरोनाभाइरस (काेभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी तथा केन्द्रीय सदस्यद्वय खिमलाल भट्टराई र विष्णु रिजालमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
तीन नेतामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुभएको छ । रिजाल र भट्टराईलाई मंगलबार संक्रमित पुष्टि भएको हो भने रायमाझीलाई सोमबार नै संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
रायमाझीलाई उपचारका लागि सैनिक अस्पतालमा राखिएको छ । भट्टराई र रिजाल भने होम आइसोलेसनमा छन् ।महाविधेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका मन्त्री रायमाझी र नेता रिजाललाई नै संक्रमण देखिएपछि बैठकमा सहभागी सबै नेता कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन् । वैशाख १० गते एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बसेको थियो ।
नेता रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासहित अन्य पत्रकारसँग सामुहिक तस्वीर खिच्नुभएको थियो । तस्वीरमा मास्क नलगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत भएको थियो ।थापा प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहने हुँदा प्रधानमन्त्री स्वतः जोखिममा परेका पर्नुभएको भने संक्रमण बालुवाटार फैलिएको हो कि भन्ने शंका पनि उत्पन्न भएको छ ।